Izincwadi ezinhle kakhulu zababhali abaningi. Amanoveli angcono kakhulu azo zonke izinhlobo zezinhlobo zemibhalo.
3 izincwadi ezihamba phambili zikaWalter Tevis
Amapulatifomu anjengeNetflix amakhosi amasha akwaMidas, akwazi ukuguqula amanoveli akude noma asebenze ngababhali abasha abachumayo njengo-Elisabet Benavent abe yigolide. Futhi iqiniso ukuthi kuneskripthi esiningi esivele sikhona ezincwadini, ukuthi kungani uchitha kubasunguli nababhali bemibhalo, uma umuntu ophethe ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaDavid Orange
Ngemuva kwe Javier Castillo, umbhali wesi-Valencian u-David Orange ukhomba umthengisi omusha wohlobo lwamanje lokungabaza. Ngamanye amazwi, lokho kujabulisa lapho isigqi sinqoba yonke into futhi ukufunda ngokuxakayo kufinyelela eqophelweni lokungabuyi kuvela ekhasini 1 ngokwalo. Mhlawumbe indaba yokuthi...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zika-Elizabeth Strout
Icala lika-Elizabeth Strout libonakala liseduze naleyo paradigm yokuhweba etholwe ngokuziphendukela kwemvelo okubalulekile. Izindaba ezincane abaningi bethu abaqala ngazo, lezo zindaba zajwayela umzuzu ngamunye wobuntwana noma ubusha... Ngandlela thize, ubumnandi bokubhala kwalabo abake baqala ukubhala,...
Izincwadi ezinhle kakhulu zikaRafael Tarradas Bultó
Ukufika kuka-Rafael Tarradas ezincwadini kuyiphuzu elithakazelisayo elebula, uma kungeyona inhlamba, yokulandisa kwamasaga omndeni ahlotshaniswa namapeni abesifazane. Ngakho-ke umbono uvuleka ngale kukaMaría Dueñas noma u-Anne Jacobs, ukucaphuna ababhali ababili abayizifanekiselo abafakwe kulokhu...
Izincwadi ezi-3 eziphezulu zikaBernhard Schlink
Kunoma yimuphi omunye umsebenzi noma ukuzinikezela, labo abafika kungalindelekile babizwa njengabaqalayo noma abasolwa ngokungena ngokungemthetho. Kuyafakazelwa ukuthi izincwadi zihlala zamukela ngezandla ezivulekile noma ngubani onokuthile okuthakazelisayo ukukutshela lapho enza kanjalo ngokuzinikela okudingekayo kwanoma yimuphi umbhali okahle. ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zika-Inés Martín Rodrigo
Umbhali waseMadrid Inés Martín Rodrigo, owine umklomelo we-Nadal 2022, uhlanganisa indaba eqanjiwe evelayo nezinye izinhlobo zokukhathazeka asithumelela zona zisuka kulezo ezinye izincwadi ezicebisa ngokulinganayo phakathi kwe-eseyi, efundisayo kanye nezintatheli. Futhi wukuthi, njengoba ngike ngaveza izikhathi eziningi, into yobuntatheli…
Izincwadi ezi-3 eziphezulu zikaRoland Barthes
Ukuxhumana kuyisipho. Ulimi ithuluzi. Umbhali ongumFulentshi uRoland Barthes wacubungula ekujuleni kolimi efuna incazelo yokugcina yesenzo, ibizo, isiphawulo... sazo zonke izinhlobo zamagama namayunithi olimi. Kodwa futhi wabeka umbono wakhe we-panlinguistic ku ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaCamila Sosa Villada
Ukudala okuvela ekugxilweni okuthathwe ku-mediocrity, njengasendabeni ka-Camila Sosa, ikwazi ukunikeza lowo mehluko odingekayo endaweni efana nezincwadi, ehlala idinga ukwehlukana, ukungafani kanye nekhefu ngokufana ukuze uqhubeke nokuba yileso sikhala senkululeko. ukungqubuzana...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi162 Okulandelayo →